के कोभिड-१९ को खोप लगाएपछि शरीर चुम्बकीय बन्छ? :: स्वास्थ्यखबर :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
के कोभिड-१९ को खोप लगाएपछि शरीर चुम्बकीय बन्छ?
स्वास्थ्यखबर आइतबार, जेठ ३०, २०७८, १७:०५:००
प्रश्न: के कोभिड-१९ को खोप लगाएपछि शरीर चुम्बकीय बन्छ? कोभिड विरुद्धको खोपमा त्यस्तो कुनै धातु वा माइक्रोचिप्सहरु हुन्छन्?
उत्तर : बन्दैन।
कोभिड-१९ को खोपहरुमा कुनै प्रकारको धातु वा माइक्रोचिप्सहरु हुँदैन। त्यसैले यस्ता अफवाहको विश्वास नगरौं। कोभिड-१९ को खोप सुरक्षित र प्रभावकारी छ र यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा कुनै प्रतिकूल असर गर्दैन।
महामारीको बेलामा भ्रम होइन सचेतना फैलाऔं।